I-Ballabrae 4* Indawo Yokuziphekela
Port Erin, i-Isle of Man
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Lucy
Ifulethi elisanda kulungiswa, lesimanjemanje, elinethezekile lokuziphekela elibheke ePort Erin Bay enhle. Igumbi lokulala eliphindwe kabili / eliphindwe kabili, igumbi lokugezela, indawo yokuhlala / yokudlela / ikhishi. Indawo yokupaka iyatholakala. Ingadi eyabiwe kanye nevulandi. Eduze kwe-Bradda Glen, ilungele amaholide, izivakashi zomshado, abahamba ngezinyawo, abagibeli bamabhayisikili nabahamba ngamabhayisikili. Isitatimende Sokufinyeleleka siyatholakala uma usicela.
Le yunithi yesimanjemanje, ekhanyayo futhi enethezekile yokuziphekela inikezela ngakho konke okudingayo ukuze uthole iholide eliphumulele e-Isle of Man. Itholakala endaweni emangalisayo ebheke ePort Erin Bay, indawo kanye nengadi kubheke eningizimu, kuthokozelwa ukubukwa okuhle ngaphesheya kolwandle ukuya ebhishi lasePort Erin futhi yehle njalo ogwini ukuya eNkonyaneni Lomuntu.
Iyunithi inesitezi esingaphansi somuzi womndeni futhi inomnyango wayo ozimele, otholakala ngezinyathelo eziyi-15 (nge-handrail nokukhanyisa).
Indawo yokuhlala inekhishi / indawo yokuphumula enohlelo oluvulekile lokudlela kanye negumbi lokulala eliphindwe kabili (elingenziwa njengewele uma liceliwe) elinegumbi lokugqoka le-en-suite kanye negumbi lokugezela.
Ikhishi lihlome kahle ngesiqandisi (enegumbi lesiqandisi), ihhavini likagesi, i-hob yokungeniswa indandatho engu-4, i-microwave, iketela, i-toaster, i-cafetière, izitsha, izitsha nezinto zokusika. Itafula lokudlela lingahlalisa abantu abangu-4 futhi ifenisha yangaphandle iyatholakala uma ufisa ukudla evulandi. Sicela uqaphele ukuthi ingadi kanye nevulandi kwabelwana ngazo nabanikazi.
Indawo yokuphumula inosofa, i-TV egobile engu-49" enamashaneli eFreeview kanye nesidlali seDVD. I-WiFi yamahhala iyatholakala.
Igumbi lokulala linombhede wenkosi omkhulu (imibhede engamawele uma iceliwe) enamatafula aseceleni kombhede kanye nenqwaba yedrowa/isikhala sokulenga izingubo. Kukhona umshini wokomisa izinwele. Impahla yokulala ihlinzekwa.
Igumbi lokugezela linebhavu elineshawa phezu kwalo, indishi enekhabethe elinesibuko (enesokhethi ye-shaver nokukhanya), indlu yangasese kanye nerediyetha yethawula elishisayo. Igumbi lokugezela linikezwa amathawula. Amathawula AKUMELE akhishwe eyunithi futhi awawona awolwandle/ukubhukuda.
Umbhede wokuvakasha kanye nesihlalo esiphezulu kuyatholakala uma uceliwe. Ukulala kombhede AKUfakiwe. Amathoyizi ezingane nama-DVD ayatholakala, kanye nezitsha zepulasitiki njll ekhishini.
Indawo yokupaka iyatholakala kule ndawo uma idingeka imoto/izithuthuthu.
Ukusuka kule ndawo kunokufinyelela okuqondile eBradda Glen lapho uzothola khona ikhefi/ibha / indawo yokudlela, inkundla yokudlala yezingane encane kanye nezindlela ezimangalisayo zasogwini eziholela eBradda Head, ezansi ogwini olunamatshe futhi ugudle isigodi sasePort Erin. Uhambo lwemizuzu eyi-15 luzokuyisa enhliziyweni yePort Erin lapho uzothola khona izitolo, izitolo ezinkulu, indawo yokuwashela izingubo, izindawo zokudlela, amathilomu, izindawo zokudlela, ulwandle oluhle olunesihlabathi, isitobhi sebhasi kanye nesiteshi sikaloliwe esishisayo.
Abanikazi bakhuluma iSpanishi kanye nesiFulentshi esiyisisekelo.
4.90 ·29 okushiwo abanye
Le ndawo itholakala endaweni ethule ye-de-sac emaphethelweni e-glen, ebheke ePort Erin Bay.
Ababungazi bahlala esizeni, endaweni ehlukile, futhi bayatholakala ukuze basize uma kudingeka kodwa ngeke bahlasele ubumfihlo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Port Erin namaphethelo